Wareegyada Cosmos, RPG loogu talagalay Apple Watch, hadda waa la heli karaa | Wararka IPhone
Sida lagu dhawaaqay, Square Enix ayaa laga bilaabay watchOS App Store Wareegyada Cosmos, RPG kii ugu horreeyay ee si gaar ah loogu heli karo Apple Watch. Ahaanshaha RPG qalab leh shaashad yar, Square Enix wuxuu rabay inay wax walba fudud noqdaan, marka kontaroolada waa kuwo fudud oo dareen leh. Xaqiiqdii, dagaalladu waa kuwo otomaatig ah oo adeegsadayaashu waxay kaliya ku qasban yihiin inay taabtaan kaliya waqti ka waqti astaanta weerarka gaarka ah.
Wareegyada Cosmos waxay adeegsadaan nidaamka safarka waqtiga ee adeegsada Digital Crown Apple Watch iyo farriinta shaqadu waxay kuxirantahay tirada talaabooyinka aan qaadeyno maalin kasta. Square Enix wuxuu sharxayaa in «Awooda waqtiga ayaa ku jirta gacmahaaga. Kaliya u isticmaal Digital Crown-ka si aad waqtiga ugulaabato! Xaaladaha qaarkood ayaa sidoo kale ku siin kara fariimo gaar ah«.
Wareegga Cosmos wuxuu yimaadaa watchOS App Store
Halyeeyga 'Cosmos Rings' wuxuu sahmin doonaa godad kumeel gaar ah iyo aagag kale wuuna isbarbar taagi doonaa markuu qabanayo howlo ama howlgallo. Naqshadeynta ciyaarta ayaa wax yar dib u dhaceysa, laakiin uma muuqdaan wax xun smartwatch. Xaqiiqdii, waxay umuuqataa halkan halkan 60fps in Apple Watch ay gaarsiin karto. Dabcan, batteriga ayaa sida xaqiiqada ah hoos udhacaya inta aad ciyaareyso kan ama ciyaar kale dhowr saacadood.
Wareegyada Cosmos waxaa lagu heli karaa iyada oo a qiimaha bilowga gaarka ah ee € 5.99, laakiin waxay ku kacaysaa € 8.99 laga bilaabo Sebtember. Way cadahay inaysan ahayn ciyaar heerka cinwaano kale u ah iPhone, laakiin shaki la’aan waxaa loo isticmaali karaa in lagu dilo waqti kasta iyo iyadoo aan laga saarin iPhone-ka jeebkaaga. Ogaysiis: maahan Isbaanish, ugu yaraan qaybtan koowaad. Sidaad aragtay? Miyaad u maleyneysaa in Cosmos Rings ay mudan tahay in la tixgeliyo in kaliya lagu ciyaari karo Apple Watch?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Cosmos Rings, RPG loogu talagalay Apple Watch, hadda waa la heli karaa